I-Riverview Retreat - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDeborah
IRiverview Retreat ikwindawo ezolileyo enemibono ephefumlayo yeKinnoull Hill kunye noMlambo iTay. Le ndlu intle inazo zonke iindawo zangoku kodwa igcina i-ambience yendawo yokuhlala engasese, ejikelezwe ngamaphandle amahle.
Indawo inokufikelela okugqwesileyo kwinani leendawo ezinomtsalane kubakhenkethi. Kungaphakathi kwemizuzu eli-10 yokuqhuba kwiziko lesixeko sasePerth kunye nemizuzu engama-45 yokuqhuba iSt Andrews, Gleneagles kunye ne-Edinburgh. Yiza ufumane le Retreat ebonelela ngento kumntu wonke!
Zombini igumbi lokulala eli-1 kunye negumbi lokulala eli-2 linokusetwa njengeebhedi ezimbini ezingatshatanga okanye i-superking enye. Igumbi lokulala eli-1 liya kusekwa njenge-superking kunye negumbi lokulala eli-2 njengewele ngaphandle kokuba ucele ngenye indlela.
4.99 out of 5 stars from 165 reviews
4.99 · Izimvo eziyi-165
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi165
Umbuki zindwendwe ngu- Deborah
Siyafumaneka ukubuza nayiphi na imibuzo ngetekisi, ngefowuni okanye nge-imeyile nangaliphi na ixesha ngaphambi kokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Perth and Kinross